नेपालमा बढ्दै जोखीम : अब कस्तो लकडाउन ? अब सरकार र जनता दुवैले यसो गरौँ ! - सिम्रिक खबर
नेपालमा बढ्दै जोखीम : अब कस्तो लकडाउन ? अब सरकार र जनता दुवैले यसो गरौँ !
Panchmane, Tarkeshwor, KTM Ph: 980-8704092
१६ साउन, काठमाण्डौ
नेपालमा बिहीवारसम्म ५२ जनाको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बताएको छ । करिब २० हजार संक्रमित पुगेका छन ।
नेपालमा लक्षण कम देखिएका संक्रमितहरु देखिएका छन । आजकल भने लक्षण सहितका बिरामीहरु थपिन लागेका छन । जुन दुखद पक्ष रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् । इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले पछिल्लो समयमा संक्रमितहरुको दर बढेको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गर्छन । उनी भन्छन्, “सङ्क्रमितको मृत्यु हुने दर पहिलेको तुलनमा बढेको छ। यसले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ।“
कोरोनाभाइरसका कारण अहिलेसम्म मृत्यु हुनेमा ८२ प्रतिशत पुरुष रहेका छन् । जनस्वास्थ्यविद्हरू नेपालमा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुरुषमा बढी देखिनु र मृत्यु हुनुलाई उनीहरूको कामकालागि घर बाहिर निस्कनु पर्ने बाध्यतासँग जोड्छन्। त्यसैगरी नेपालमा सबैभन्दा बढी ४० देखि ४९ वर्ष उमेरका व्यक्तिहरूले कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनु परेको देखिन्छ। तर हालैका दिनमा वृद्ध उमेर समूहमा मानिसहरूको मृत्यु हुने क्रम बढेको छ। समग्रमा कुल मृत्यु हुनेमध्ये लगभग ७० प्रतिशत ४० वर्ष उमेर कटेकाहरू छन्।
केही दिनयता नेपालमा कोरोनाभाइरस संक्रमण समुदायस्तरमा फैलने जोखिम बढेको र यसै बेला यसबाट गम्भीर बिरामी हुनेहरूको संख्या पनि बढिरहेको बताइन्छ। केही साता अगाडिसम्म ९९ प्रतिशतभन्दा धेरै सङ्क्रमितमा लक्षण देखिएका थिएनन् तर साउन १४ गतेको आँकडामा २२ जना सघन उपचार कक्ष वा भेन्टिलेटर राखिएको पाइएको छ।
यो बढ्दो जोखिमका माझ के अब सरकारले रोग नियन्त्रण र रोकथामका निम्ति अहिले कायम गरिराखेको विधिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ? अनि आम जनताले चाहिँ के गर्नुपर्छ? विविसी नेपालीको सहयोगमा हामी केही कुराहरु राख्न गइरहेका छौँ ।
जनस्वास्थ्यविद्हरू डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती तथा डा. अनुप सुवेदीसँगको कुराकानीमा उनीहरुले सरकारलाई परीक्षण, सम्पर्क पहिचान, अलग्याउने विधि तथा सीमित लकडाउनका बारे सुझाव दिएका छन् भने आम मानिसलाई पनि सजिलै रोगबाट बच्ने केही सुझाव दिएका छन्।
अब तत्काल के गर्न सकिएला ?
१. परीक्षण बढाउँ
केही अगाडिसम्म दैनिक ३,००० भन्दा बढी पीसीआर परीक्षण भइरहेकोमा अहिले ६,००० वरिपरी पुगेको छ। प्रति दश लाख जनसङ्ख्यामा नेपालले १२,५०० परीक्षण गरिरहेको र त्यो अनुपात यो क्षेत्रमा तुलनात्मक राम्रो भएको सरकारको भनाइ छ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वप्रमुख डा. उप्रेती भन्छन्, “तर जति परीक्षण बढायो उति संक्रमित धेरै देखिएको हुनाले एक हदसम्म यो बढाउनै पर्छ, विभिन्न समुदायमा, लक्षण देखिएकाहरूमा तथा जोखिमपूर्ण समूहमा परीक्षण विस्तार हुनुपर्छ।“
डा. अनुप सुवेदीको सुझाव चाहिँ यस्तो छ – “केही दिन यता नाका(नाकामा पनि पीसीआर परीक्षण थालेर राम्रो गरेको छ। “तर सरकारले परीक्षणको निर्देशिका खुकुलो बनाउनुपर्छ। अहिले तपाइँलाई ज्वरो वा अन्य लक्षण आएपनि यात्रामा कतै ननिस्केको वा कोही संक्रमितसँग भेट नभएको पाइए पीसीआर परीक्षण गर्न पाइँदैन। यस्ता विषय सहज बनाइनुपर्छ।“
२ सम्पर्क पहिचान
यो दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। “हामीकहाँ कोही सङ्क्रमित भएको नतिजा नै पाँच सात दिनपछि आउँछ। त्यसपछि ती संक्रमित कसकसको सम्पर्कमा रहे भन्ने बारे विस्तृत पहिचान गर्नुपर्छ,“ डा सुवेदीले भने।
“यो कठिन काम भएपनि गर्नैपर्छ। लाग्छ यहाँ केवल फोन गरेर परिवारलाई सतर्क गराइएको हुनसक्छ। यसको दायरा बढाउनैपर्छ।“ सङ्क्रमित व्यक्ति लक्षणविहीन छ भने उसले घरमात्र होइन, बाहिर चिया पसल वा अन्यत्रको भेटघाटबारे पनि विस्तृत विवरण लिनुपर्ने उनले बताए।
डा. उप्रेतीको विचारमा चाहिँ सम्पर्क पहिचानको कार्य भनेको जतिसक्दो चाँडो गर्नु जरुरी हुन्छ। यसबारे अहिले के भइरहेको छ वा सरकारले कसरी गरिरहेको छ भन्ने प्रस्ट सूचना प्राप्त नभएको उनले बताए।
३. बिरामीलाई अलग्याउने
नेपालमा सबैको पहुँचमा आवश्यक सुविधायुक्त घर नहुने हुनाले बिरामीलाई घरमै अलग्ग बस्न सुझाव दिने अवस्था अहिले नरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
त्यसमाथि सुविधासम्पन्न अस्पतालको वरपर बस्नेका लागि मात्र यो विकल्प उचित हुने ठानिन्छ। “त्यसैले व्यवस्थित किसिमले स्वास्थकर्मीको निगरानीमा अलग्याएर राख्नुपर्छ ताकि अवस्था बिग्रिने वित्तिकै उपचार दिन सकियोस् र घरभित्रै कोही बिरामीले अरूलाई नसारोस्,“ डा. सुवेदीले भने ।
४. सघन उपचारको क्षमता वृद्धि
आगामी दिनमा गम्भीर बिरामी हुनेको सङ्ख्या बढेमा त्यसलाई धान्न सक्ने गरि सघन उपचारको क्षमता वृद्धितर्फ लागिहाल्न सरकारलाई डा. उप्रेतीको सुझाव छ।
“खासगरी अक्सिजनको उपलब्धता, सघन उपचार कक्ष तथा भेन्टिलेटरको सङ्ख्या वृद्धि गर्नुपर्छ,“ उनले भने। अलग्ग्याएर राख्ने आइसोलेसन केन्द्रमात्र नभइ अब अस्पतालकै शैया बढाउन जरुरी भएको विज्ञहरू बताउँछन्।
अब कस्तो लकडाउन?
संसारभरि नै सुरुमा राष्ट्रव्यापी रूपमा लगाइएका लकडाउनहरू अहिले स्थान विशेषमा खुम्चिएका छन्। नेपालमा पनि अब पूर्ण लकडाउनको मोडलभन्दा आवश्यकता अनुसारका सीमित लकडाउनको प्रयोग सही हुने विज्ञहरूको सुझाव छ।
“धेरै संक्रमितहरू भेटिएको वा धेरै मृत्यु भएको स्थानमा स्थानीय रूपमा आवागमन नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यस्तो आवश्यकता ठूला र सघन बसोबास भएको ठाउँमा ज्यादा जरुरी हुन्छ,“ डा. सुवेदीले भने।
आम मानिसलाई के सुझाव?
डा. सुवेदीले जापानको उदाहरण दिँदै तीनवटा मुख्य विषयमा ध्यान दिन आम मानिसलाई सुझाव दिएका छन् ।
– एक, अरू मानिससँग निकट बसेर वार्तालाप वा कुराकानी गर्नबाट जोगिने,
– दुई, भिडभाड भएका स्थलमा नजाने,
– तीन, हावा आवतजावत गर्न नसक्ने बन्द कोठा वा हलमा नजाने।
– त्यो बाहेक मास्कको अनिवार्य प्रयोगमा उनले जोड दिए।
“अध्ययनहरूले के भन्छ भने सबैजनाले मास्क लगाइदिने हो भने यो महामारी त्यसै हराएर जान्छ।“
“६० प्रतिशतभन्दा धेरै मानिसले लगाइदिने हो भने पनि एकजनाले अर्कोलाई संक्रमण सार्ने दर एकभन्दा कम हुन्छ र महामारी नियन्त्रण हुन्छ,“ उनले भने।
“सामान्य सर्जिकल मास्क वा दुई किसिमको कपडा प्रयोग भएको साधारण मास्कले पनि यो काम गर्छ। उदाहरणका लागि सूती वा फलाटिनको दुई तहको मास्क लगाउने हो भने एक त भाइरस मिसिएको छिटा रोकिन्छ अर्को त्यसमा विकसित हुने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक गुणले पनि भाइरस सर्नबाट रोक्ने पाइएको छ,“ डा. सुवेदीले थपे।
मास्कको पहिरनलाई सामाजिक तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको अभिन्न अङ्ग मान्नु पर्ने सुझाव विज्ञहरूले आम मानिसलाई दिएका छन्। डा. उप्रेतीले भने, “यो रोगबाट मलाई र मेरा आफन्तलाई जोगाउने पहिलो कर्तव्य मेरो नै हो भनेर हामीले सोच्नु प¥यो। त्यही अनुसार मास्क प्रयोग वा दूरी कायम गर्ने र हात धुने ग¥यौँ भने संक्रमण फैलन कम हुन्छ।“
उनले आम मानिसका निम्ति यस्ता सन्देश बुझिने भाषामा सर्वव्यापी बनाइनुपर्ने सुझाव पनि दिएका बिबिसी नेपालीले जनाएको छ ।
सिम्रिक खबर ८ घण्टा अगाडि